Dhulgariir xoog leh oo 7.1 ah oo ka dhacay Acapulco, Mexico ayaa ku tilmaamay Orange, suuragal inay noqoto mid ba'an
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dhulgariir xoog leh oo 7.1 ah oo ka dhacay Acapulco, Mexico ayaa ku tilmaamay Orange, suuragal inay noqoto mid ba'an
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Mexico • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
A 7.1. dhulgariir ku dhow Acapulco, magaalo ka badan 2 milyan ayaa xumaan karta. Laba dhulgariir oo kala ah 6.2 iyo 7.1 ayaa lagu qiyaasay daqiiqado gudahood fiidnimadii Talaadada gobolka Guerreo ee Mexico.
Guerrero waa Dawlad ku taal xeebta Baasifigga ee Mexico. Magaalada loo dalxiis tago ee Acapulco, oo ku taal gacan weyn oo ay taageerayaan dhaadheer iyo buuraha Sierra Madre del Sur, ayaa caan ku ah nolol maalmeedka tamarta badan iyo xeebaha ku teedsan Acapulco Bay iyo aagga Acapulco Diamante.
Dhulgariir xooggan oo 6.2 ah ayaa lagu qiyaasay 8.47 fiidnimo, iyo 7.1 dhulgariir kale daqiiqado kadib, iyo 7.4 kale ayaa ku dhuftay gobolka ilbidhiqsiyo kadib. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa ku nool meel 15 mayl u jirta dhulgariirka.
Dhulgariirka waxaa u qoondeeyay Orange USGS waxaana lagu hagaajiyay 7.0 markii dambena dib loogu noqday 7.1
Digniinta oranji ee dhimashada la xiriirta ruxitaanka iyo khasaaraha dhaqaale. Khasaare iyo burbur baaxad leh ayaa laga yaabaa in musiibadu ay noqoto mid baahsan. Digniinta oranji ee hore waxay u baahdeen jawaab heer gobol ama qaran. Caadiyan waxyeellada qaybtan waxaa lagu qiyaasi karaa inta u dhexeysa 100 Milyan illaa 1 Bilyan oo Doollar, taas oo ka yar 1% GDP -ga Mexico.
Haddii aad qoys ku leedahay Acapulco, Morelos ama Mexico City FADLAN ka fiiri iyaga, tan dhulgariir kaftan ma ahayn !!!
Ku dheji eTurboNews
Dhulgariirka oranji ayaa lagu qiyaasaa inay suuragal tahay inay sababaan dhimashada boqolaal ama kumanaan.
Adeegga Seismological National ayaa kor u qaaday dhulgariirkii ku dhuftay xeebta Baasifigga ee Mexico si uu u cabbiro 7.1. Dhulgariirku wuxuu ku dhow yahay goobta loo maro Acapulco. Dhulgariirka ayaa dadka iyo dalxiisayaasha u diray waddooyinka wuxuuna ruxay dhismayaal aad uga fog magaalada Mexico.
Warbixino badan maahan kuwa ka imanaya Acapulco oo muujinaya hubanti la'aan.
#InfoGlobal | Un sismo de magnitud 7.1 cerca de Acapulco #México se registró la noche de este martes. Autoridades no han reportado pérdidas humanas hasta el momento no daños de gravedad. pic.twitter.com/bl3C0nfv0T
Tani waa qiyaasta USGS
Guud ahaan, dadka ku nool gobolkan waxay ku nool yihiin dhismayaal isku jira dhisme nugul iyo dhulgariir. Noocyada dhismaha ee ugu nugul waa derbiga dhoobada iyo dhoobada adobe oo leh dogob laami ah oo la taaban karo.
Dhulgariirkii dhawaan ka dhacay aaggan ayaa sababay khataro labaad sida tsunamis iyo dhul -go 'oo laga yaabo inay sababeen khasaare.
Sida laga soo xigtay USGS ma jirto hanjabaad tsunami ee Baasifigga dhulgariirkan awgii. Digniinta Sunaamiga waxaa kiciyay mas'uuliyiinta maxalliga ah ee Xeebta Baasifigga ee Meksiko. Ma jiraan wax warbixinno ah oo laga yaqaanno sunaamis meel kasta waqtigan.
Hadda dhulgariirkan Mexico ayaa la dareemay sida
aad u xoog badan 756,000+
Xoog leh 379,000+
Daciif ah 25,754
Waa goor hore in la sheego inta uu le'eg yahay khasaaraha dhulgariirkan.
Dhul -gariirku wuxuu ahaa 8 mayl koonfur -bari #Acapulco, Guerrero. Koronto la’aan iyo gaas ka daatay ayaa la soo sheegayaa.
Hanjabaadda Tsunami ee Badweynta Baasifigga ayaa la qiimeeyay lana baajiyay.
Dhul -go 'aagga u dhow ayaa suurtogal ah, laakiin waxay u badan tahay inuu saameeyo dad yar.
Saamaynta ay ku yeelatay dad badan oo ku nool gobolka Acapulco ayay u badan tahay waana la qiimaynayaa.
Dhulgariirku wuxuu lahaa dad meel aad u fog Mexico City ku soo ordaya waddooyinka.
Sida ay sheegayaan wararka maxalliga ah, dhulgariirku wuxuu ku dhuftay kaliya 18 km magaalada loo tamashlaha tago ee Acapulco waxayna leedahay saamayn weyn.
#ÚLTIMAHORA #Sismaan de magnitud 7,4 en #Acapulco.#Terremoto #Dhulgariir #México pic.twitter.com/IohZbjlGVv
Dhulgariirku wuxuu awood u leeyahay inuu wax yeelo, eTurboNews la socon doona warkan jabinta ah.
USGS ayaa dhejisay dhulgariirka oo ahaa 7.0 xoog leh waxaana lagu cabiray 8.47 pm waqtiga maxaliga ah ee Acapulco. ama 1.47 am UTC markay tahay Sebtember 9
Goobta: 16.950 ° N 99.788 ° W oo leh 12.6. qoto dheer km.
Fiidiyowgan oo laga soo qaaday magaalada Mexico City ee Roma Norte intii uu dhulgariirku socday waa mid dhab ah #Mexico #War degdeg AH #MexicoCity #Dhul gariir pic.twitter.com/ns0gjhdnXM
- John Ogaanshaha wararka 2 (@johnalka2) September 8, 2021
#Beelasha: Warbixinnadii hore ee burburka Acapulco, #Mexico, ka dib baaxadda 7.4 # dhulgariir. pic.twitter.com/M21wOO0XkE
Dhul gariirka ayaa laga dareemay magaalada Mexico.
VIDEO: Muuqaallo laga dhisayo meel u dhow Acapulco, Mexico kadib dhulgariirkii 7.4M. YAAB!
- Xayiraadda Wararka Mareykanka (@USNewsBlock) September 8, 2021
eTurboNews akhristayaasha ku sugan Acapulco waxay nagala soo xiriiri karaan WhatsApp, Telefoon, emayl https://travelnewsgroup.com/post/